शब्दक्षेत्र: April 2010
poet khanalka sirjana: Rainy days(Prakash Sayami )mathi tippani
वर्षादी दिनहरूमा रुझ्दा भिज्दा
प्रकाश सायमी के होइनन् ? भनेर मैले यो लेख शुरु गरेँ भने मलाई सजिलो होला ।
एक सफल नाटककार,फिल्मकार,कवि,कथाकार,निबन्धकार,गीतकार,समीक्षक आदि । एक शव्द अलराउन्डर । म उनको ईष्र्यालाग्दो स्मरण क्षमतासँग एकदमै प्रभावित छु । उनी एउटा लोभलाग्दो बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् । उनको बारेमा बढि नलेखौँ ,प्रकाश प्रकाश हुन् ,यत्ति ।
वर्षादी दिनहरू झन्डै उनको अटोबायोग्राफी हो । उनले यसलाई निबन्धसङ्ग्रह भनेका छन् । भावहरूको स्वच्छन्दता र निर्बन्धताका हिसाबमा यो निबन्धसङ्ग्रह हो र यसको अध्ययनपश्चात उनको आफ्नै बारेमा पनि धेरै विषयवस्तु थाहा हुने भएकाले यो एउटा अटोबायोग्राफी पनि हो ।
उनको यो कृतिमा उनी आफूमा भएको वास्तविक बौद्धिक ओजको खुलासा भएको छ । यसर्थ यो कृति एक महत्तम र उत्कृष्ट सावित छ ।
सोह्र निबन्धहरू छन् यस कृतिमा र सोह्रै आना राम्रा पनि । सायमीको जीवनका समग्र उहापोहहरू छताछुल्ल पोखिएका छन् हरेक निबन्धहरूमा । हरेक निबन्धसँग फरक फरक टेस्ट छ , फूलको पत्रपत्रमा सुगन्ध भएजस्तो, मानौँ । शङ्कर लामिछानेका निबन्धहरूबाट प्रभावित उनले निबन्धमा शङ्कर लामिछानेको अनुपस्थितिलाई मेटाइदिन सफल छन् । शङ्करले एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याजमा जसरी प्याजका पत्रपत्रझैँ मानेर जीवनको पत्रपत्रको नयाँ उत्खनन् गरेका छन् ,हो यिनको रचनामा पनि जीवनका भित्री तहहरूको स्वरागपूर्ण विश्लेषण पाइन्छ ।
बम्बई,गुरू र बर्षादी दिनहरू
यो उनको स्वकथा जस्तो छ । आफ्नो भाग्य खोज्दै हिँडेको एउटा पात्रको सपाट विश्लेषण हो –यो निबन्ध । “एउटी आमाले सातवटा बच्चा जन्माउन सक्छिन् तर कसैलाई उनको कर्म र भाग्य दिन सक्दिनन् ”। भाग्य र कर्म आफैँले बनाउनु पर्ने र यो उपहारसिद्ध कसैबाट प्राप्त नहुने तर्फ सङ्केत यसमा उदृत छ । बम्बईमा फिल्ममा खेल्ने अभिलाषा बोकेर पुग्नेहरूको एउटा दुखलाग्दो कथाको अनुशीलन हो –यस निबन्ध । रोबर्ट फ्रस्टको यो कविता उनको जीवनको प्रेरणा भएको स्विकारेका छन् –
द उड्स आर लभ्ली ,डार्क एन्ड डिप
एन्ड माइल्स टु गो बिफोर आइ स्लिप,
एन्ड माइल्स टु गो बिफोर आइ स्लिप !
यो संस्मरणात्मक निबन्ध हो । इन्डियामा पलाएन भएका नेपालीहरूको गह्रुङ्गो व्यथा समेटिएको यो निबन्धले नेपालले गुमाएका कतिपय भूमीहरूसँगको नेपाली नाता र हिसाबकिताबरू सम्झाउँछ र त्यहाँकाहरूले पोखेको नेपालप्रतिको मायालाई इङ्गित गर्ने विषय त्यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका र महेन्द्रका विचारहरू राखिनुले जीवित गराएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । यो दैनिकीपरक निबन्धले जटिल संवेगहरूको एउटा बहाव समातेको छ ।
चैत्र तीनको सम्झना
नेपालमा विभिन्न जनआन्दोलनहरू विविध नाममा भएका छन् । ती सबै जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा भए वा भएनन् । यसमा कसको सबलता रह्यो र कसको दुर्बलता । यी आआफ्नै ठाउँका विषयहरू हुन् । तर ती जनआन्दोलनमा स्रष्टाहरूको योगदान अमूल्य रह्यो भन्नेमा सम्पूर्णत ः सत्यता छ । गोपालप्रसाद रिमालको “आमा त्यो आउँछ ...”,“एक युगमा एक दिन एक चोटी आउँछ...” देखि श्रवण मुकारुङको “मालिक म बौलाएँ... ” र विप्लव ढकालको “यही झन्डाबाट निकाल्छु घन र फुटाउँछु...” सम्म जताततै विद्रोहको झन्डा उचालेर सही समय आगमनको कामना गर्ने पङ्क्तिमा सर्जकहरू अग्रसर भइरहे तर सर्जकहरूको भूमिकाको कदर कहीँबाट हुन नसकेको मनोवेगहरूको उद्वेलनको अभिव्यक्ति हो चैत्र तीनको सम्झना । यिनीहरूले कहिल्यै टायर बालेनन् ,यिनीहरूले कहिल्यै कसैको घर फुटालेनन् र कहिल्यै नेपाल बन्द गरेनन् र यिनीहरूले कहिल्यै न्याय पाएनन् । हो तर शक्तिको आडमा होइन विचारको आडमा न्याय खोज्छन् सर्जकहरू भन्ने विषयको उठान यो रचनाले नजानिदो ढङ्गबाटै गरेको छ ।
यहाँ उल्लिखित एक वाक्य यस्तो छ –“तपाईँहरू कवि लेखक हो कि कुकुर ?”यो सरकारी प्रहरीहरूले बोलेको वाक्य हो । त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग छ –“हिमाली शान्ति राज्यमा कवि–लेखकको क्रन्दन ”। यो बीबीसीसँग नेपाली राज्य पक्षधर कविले दिएको इन्टरभ्यू ।
मेरा नजरमा रमण प्यारा छन्
यो उनको आत्मकथनात्मक निबन्ध हो । दक्षिण भारतीय मूलका एक ख्यातनामा रमण महर्षिलाई उनले यस निबन्धमा गुरु मानेका छन् । धेरै महर्षिहरू (रजनीश ओशो,परमहंस योगानन्द, जे कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति,विवेकानन्द,रामकृष्ण परमहंस,साईबाबा ,दलाई लामा,शिवपुरी बाबा आदि ) को खोज र अध्ययन पछि उनले रमणलाई गुरु मानेको बताएका छन् ।
प्रकाश सायमीको यो निबन्ध मूलत ः उनका रहर इच्छाहरूलाई पाठकसामु प्रस्तुत गर्ने एउटा कलात्मक निबन्ध हो । यसमा प्रकाशका तरङ्गहरू आरोह–अवरोह भएर हिँडेका छन् । उनी लेख्छन् –
ऊ कवि भयो छत्तिस सालको आन्दोलनपछि ।
ऊ अभिनेता भयो अस्कलमा बायोलोजी पढ्न नसकेपछि ।
ऊ फिल्मकार भयो रङ्गकर्म त्यागेपछि ।
उनी बोर्डमा नउत्रेका कारण उनका पिताश्री रिसाएको विषयलाई पनि थोरै उठाएर विश्राम दिएका छन् ।
भैरवी थाटको सन्ध्यास्वर
–दाई यो देश सधैँ यस्तै हो त ?
–के हामीले भावीपुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न लायक नयाँ नेपाल छ त दाई ?
–सर ! दुख किन घरीघरी हामीलाई नै परिरहन्छ ?
–तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभो । दुख सधैँ चञ्चल हुन्छ । त्यो स्थाई हुन्न । त्यो कहिले तपाईँसित,कहिले मसित आएर बसिरहन्छ । यसले कहिले एकै ठाउँमा बस्न मन गर्दैन । योसँग त्यो क्षमता छैन ।
यी भलाकुसारीहरूमा दर्शनको व्यापकता प्रशस्त छ । यस निबन्धमा गायनका विषयप्रसङ्गहरू उठेका छन् ।
विविध भारती भर्सेज क्याप्टन राणा
यस लेखनमा उनले प्रशंशा गर्ने र उनको प्रशंशा गर्ने यो समाजले अलि कम चिनेको वा यसको एउटा अनरिकग्नाइज्ड पात्र विशेषको चर्चा छ । जनकबहादुर राणा ,एक भारतीय भूमीबाट नेपाल छिरेका र बन्दुक छाडेपछि कलम समाएका एक पूर्व क्याप्टेन र जीवनको उत्तरार्धमा साहित्य लेखनीमा लागेका व्यक्ति हुन् र उनले प्रकाशलाई सुरेन्द्र पाल र विविध भारती नाम प्रदान गरेकाप्रतिको चर्चा छ –यस निबन्धमा ।
बाँकी समय र सम्झना
हरिभक्त कटुवालसँगको सामिप्यताले लेखाएको यो निबन्धमा उनले हरिभक्तले अटोग्राफ दिन नमानेको प्रसङ्गलाई अवतरण गराएका छन् ,कारण थियो हरिभक्तका विचारमा अटोग्राफ लेख्नु भनेको बिर्सन सहयोग पु¥याउनु हो । यहाँ एउटा प्रसङ्ग उल्लेख छ–रक्सी खान्थे कटुवाल ,मात्थे देवदत्त ठटाल,लड्थे पछारिन्थे कटुवाल,दुख्थ्यो हिमालय लोहनी र सुरेन्द्रनाथ लोहनीलाई ,गीत लेख्थे कटुवाल,गाएर जम्थे नारायणगोपाल । यानेकी यहाँ कटुवाल अलराउन्डर थिए । कटुवालका मर्मस्पर्शी गीत र कविता पछाडिको उनको अप्ठ्यारो जीवनगत परिचय र केही त्रुटीगत स्वभावको आँकलन यस निबन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
धुस्वाँ ःकहिल्यै नझर्ने पूmल
धुस्वाँ सायमीको जीवनीगत् यथार्थमा घुमेको यो लेखन धुस्वाँलाई चिरपरिचित राख्न सहयोगीसिद्ध छ । उनले लेखेका छन्– धुस्वाँ नेपाली साहित्यका अन्तर्राष्ट्रिय दूत हुन् । धुस्वाँ कविता लेख्थे । उपन्यास लेख्थे । उनका सिर्जनाहरू नेपाली ,नेवारी,हिन्दी लगाएतका भाषामा पढ्न पाइन्छ । उनले बोलेका थिए –संसारका सबै भाषाहरू बराबर छन् ,शायद् यसैले उनलाई धुस्वाँ सायमी बनायो । धुस्वाँलाई प्रकाश सायमीले लेखनको कोशौँ टाढासम्म पनि मान्छे नै खोजिरहने एउटा सर्जकका रुपमा चिनाएका छन् । डा.तारानाथ शर्माका अनुसार धुस्वाँर्का गङ्की’ एउटा पाथफाइन्डर किताब हो र हाम्रो पनि धुस्वाँ एउटा पाथफाइन्डर नै हुन् कुनै द्विविधा छैन ,प्रकाश यस्तै बताउँछन् ।
ध्रुवचन्द्र गौतम ःएउटा अलिखित कथा
ध्रुवचन्द्रको पियक्कड स्वभाव र पुरस्कारमोहप्रति शालीन व्यङ्ग्य गरेका यिनले यो निबन्धमा उनको अध्ययनशील गुण ,स्मरण क्षमता र आख्यानलेखनको खुबीलाई हार्दिकताका साथ स्विकारेका छन् । यो निबन्धमा केही रुपमा कलाको कमी देखिएपनि प्रभावजनक भने अनुभूत हुन्छ ।
देवकोटा ः स्मृति प्रदेशमा
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उनको समकालीन समयदेखि हालसम्म एकोहोरो नेपाली साहित्यमा छाइरहने कालजयी सर्जक हुन् । यस निबन्धमा सायमीले देवकोटा र गालीब ,देवकोटा र हरिवंश राय बच्चन ,देवकोटासँग पन्त ,निराला र प्रसाद आदिसँगको दाँजोहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । देवकोटा र गालीबको तुलना यसरी भएको छ –
–गालीब आपूmले कमाएको तलब लिएर कहिल्यै घर आउँदैनथे भने देवकोटाका हातमा पनि सङ्क्रान्तिको दिनसमेत तलब हातमा हुन्नथ्यो ।
–गालीब पनि राजशाहीका बेला पीडित कवि थिए ,जस्तो देवकोटा पनि त्यस्तै समयका प्रतीक बने ।
– गालीबका बेला तत्कालीन शासक बहादुर शाह जफर पनि कवि थिए ,देवकोटा समयमा तत्कालीन शासक महेन्द्र पनि कवि थिए ।
–गालीबले ढल्दै गरेको मुगल साम्राज्य र उठ्दै गरेको ब्रिटिस शासन दुबै देखे त्यस्तै देवकोटाले पनि ढल्न लागेको राणाशासन र त्यसपछिको राजशाही शासन दुबै देखे ।
देवकोटा एक चमत्कारिक व्यक्ति थिए व्यवहारमा र साहित्य दुबैमा । या भनौँ साहित्यलाई नै व्यवहार बनाएका थिए । ओशो भन्छन् –“ह्वाट् यु डु द्याट् सुड बी योर स्टेट अफ माइन्ड” । हो देवकोटा त्यस्तै थिए । देवकोटाको सम्झनालाई डम मोरेले आफ्नो प्रिय आमासँग तुलना गरेर उठाएका प्रसङ्गलाई सायमीले यसरी जोडेका छन् –“सी वाज पेनफुल्ली थिन् ,थिनर द्यान देभकोटा ह्याड् बिन ,एन्ड हर ग्रे हेयर स्ट्र्यागल्ड फ्रम हर बर्ड फ्रेल स्कुल”। सायमीको यो लेखन पनि सशक्त छ ।
कैयन् कमलेश्वर ःकैयन् पाकिस्तान
यो निबन्ध सायमीले आफ्नो वाक्कलाबाट आफैँ प्रभावित भएर लेखेको निबन्ध हो । आपत् परेपछि कहिल्यै दगुर्न नसक्ने मानिसपनि म्याराथुन धावकजस्तो दौडिन सक्दोरहेछ ,यस्तै साविति दिने यो लेखनमा आफ्नो मनपर्ने लेखकप्रतिको सम्मोहन् ,श्रद्धा र आस्थाको पनि प्रकटिकरण भएको छ र्। कित्ने पाकिस्तान’ कृतिका लेखक कमलेश्वरको विशेषत ःयसमा चर्चा छ ।
गुलजार ः फुर्सतका रात र दिनमा
गालीबको तेस्रो नोकर हुँ भन्ने गुल्जारसँग गासिँदै प्रकाश लेख्छन् –म पनि शायद् शङ्करको कुनै नोकर हुनसक्छु ,जो आजसम्म बाँचिरहेको छ । उनी गुल्जार लेख्छन् ,पढ्छन् ,बोल्छन् । गुल्जार लेख्दै उनी भन्छन् – गुल्जार सम्झिन मलाई कुनै फुर्सद्का रात र दिन चाहिँदैन । उनी गुल्जार यसरी पढ्छन् –
नाम सोचेकै थिएन ,छ कि छैन र्
अमा’ भनेर बोलाए एकजनालेर्
ए जी’ भनेर बोलाए अर्कोलेर्
अबे ओ’ यार भन्दछन्
जो पनि जे जस्तो आउँछ
उसले त्यसरी नै पुकारे
तिमीले एउटा घुम्तीमा अचानक जब
मलाई गुलजार भनेर दियौ आवाज
एउटा सिपीजस्तै खुल्यो मोती
मलाई एउटा माने मिलेजस्तै भयो
आहा !यो नाम राम्रो छ
फेरि मलाई नामले बोलाऊ त ।
बोर्खेस अराजक कवि थिए । उनले लेखे –
यदी म जीवन फेरी बाँच्न पाउँछु भने
अर्को क्रममा म कोशिश गर्नेछु
म अझै धेरै गल्ति गर्नेछु ।
प्रकाश बोर्खेस मन पराउँछन् । उनको चक्कु मन पराउँछन् । चक्कुजस्तै चक्कु कविता । बोर्खेसहरूसँगै भुलिरहन चाहन्छन् अधिकाधिक ।
“समय यो पदार्थ हो,जसमा म बनेको छु ।समय एउटा छाल हो ,जो मलाई बगाउँदै लैजान्छ तर म छाल हुँ । त्यो चितुवा हो जो मलाई चिरफार गर्दछ तर म चिता हुँ । त्यो आगो हो जो मलाई निल्न खोज्छ तर म पनि आगो हुँ । दुनियाँ दुर्भाग्यवश असली हो–दुर्भाग्यवश म बोर्खेस हुँ ”।यसले सायमीलाई चित्त बुझाइदिएको छ।
“चमत्कार गर्ने सुविधाबाट देवता भलै विचलित भएको होस्,लेखक होइन । लेखक हमेसा अतीतलाई बदल्न सक्दछ ...। काफ्कालेजस्तै । ऊ स्वयम् आफूभन्दा पहिल्यै आउने कुराको रचना गर्न सक्दछ” । सायमी यी पङ्क्तिहरूमा अल्झिरहेका छन् । बत्तिको सम्मोहनले ग्रसित पुतलीजस्तो । ती पुतलीहरू नबाँचेका रेकर्डहरू प्रायश ः हुन्छ तर यिनी झन् उफ्रिउफ्रि जीवनतिर फर्किन्छन् ।
मीराबेलाको सङ्गीतमा एकालाप
अष्ट्रियाका अभिव्यक्तिवादी कवि यार्क त्राक्लको जीवन परिमितिहरूमा घुमेको यो निबन्ध एकालापमा आधारित छ । कवि ,लेखक ,सङ्गीतकार ,गायक ,गीतकार आदि (समग्रमा सर्जक) हरूको जीवन अलि बढी अव्यवहारिक भेटिने विषयवस्तुको बयान छ यसमा ।“ आत्मा यो धरतीको एउटा अपरिचित जस्तै हो ”,यो यार्क त्राक्लले आफ्नो किताबमा उतारेको एक दार्शनिक एवम् आत्मिक कथन हो । यी र यस्तै विषयप्रसङ्गहरू विशेषत ः उठान यस निबन्धमा गरिएको छ ।
शङ्कर लामिछाने ः व्यक्ति र अतीत
शङ्रकर लामिछाने नेपाली निबन्धलेखनको एउटा नयाँ आयाम र छुट्टै इतिहास हुन् । यिनको नवीनतम शैली र पठनबोधले नेपाली निबन्धलाई नयाँ तर सशक्त मार्गतिर डो¥याएको छ । प्रकाश सायमीको निबन्धलेखन पनि लामिछानेको लेखनसापेक्ष देखापर्दछ । तर उत्तिकै शक्तिका साथ । यिनी शङ्करको जीवन उत्खननमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भएर लागेका छन् । विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाएमा यिनी शङ्करले थाहा नपाएका तर शङ्करका धर्मपुत्र सिद्ध छन् । उनी लेख्छन्–
–भूमिकाको आतङ्क मच्चाउने शङ्कर
–प्रयोगलाई परम्परा मान्ने शङ्कर
–सङ्गीत र चित्रकला अँगाल्ने शङ्कर
–कृतिश्वको सदैव दावा गर्ने शङ्कर
–पढ्न र पढाउन रुचाउने शङ्कर
–चोरीको आरोप बिनाढोङ स्वीकार्ने शङ्कर
–आपूmलाई लेखक हैन इन्टरप्रिटेटर मान्ने शङ्कर
शङ्कर ! शङ्कर !! शङ्कर !!! यानेकी रमण महर्षि भन्दा धेरै प्रकाशले शङ्करलाई गुरुझैँ मान्छन्जस्तो लाग्छ मलाई ।
एउटा लेखकको खोजीमा
प्रकाश सायमीमा किताबप्रति कति मोह छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउने यो सर्वोच्च लेखनी हो । यस निबन्धमा उनले आपूm साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले कुनै कार्यक्रमका सन्दर्भमा धेरै अगाडि नाम लिएको एउटा किताब र तिनको लेखक पत्ता लगाउनुको ध्येयले गाँजिएको तर सो उपन्याससापेक्षको उपन्यासका लेखक धेरै खोजपछि फेला पारेको तर सो उपन्यास आजपर्यन्त फेला नपरेको नमीठो पीडा पोखेका छन् । यो उपन्यास थियो रोब ग्रियरर्को इरेजर’ जुन उनले आजसम्म खोजिरहे ।सायमी पुस्तकका अध्ययनका निम्ति काकाकुलजस्तो भएर लागिरहन्छन् । खै ! कुन त्यस्तो इन्टरनल पावरले गाइड गर्छ उनलाई ?,थाहा छैन ।
प्रकाश सायमी विशत् प्रतिभा भएको एउटा जल्दोबल्दो व्यक्ति हुन् । उनमा भएको अध्ययन खुबी ,त्यसपछिको स्मरण खुबी ,अझ त्यसपछिको त्यसलाई वाक् क्षमताका साथ अभिव्यक्ति दिनसक्ने खुबीको जति प्रशंशा गरेपनि कम हुन्छ । उनी चर्चामुखी मान्छे हुन् कि ? भन्ने द्विविधाले कहिलेकाहीँ म सताइएको पनि छु । तर म डार्विनर्को स्ट्रगल फर एक्जिस्ट््यान्स’ सम्झिन्छु । ऊ भन्छ र्–डु अर डाइ’ । प्रकाशले आफूलाई देखाउन चाहेनन् वा लुके भने त प्रकाश, प्रकाश हुने छैनन्,यसकै निम्ति त सङ्घर्ष छ यो संसारमा । डार्विन भन्दै जान्छ –सङ्घर्षमा सफल हुनेहरूको अस्तित्व रहन्छ र विफल हुनेहरू विलुप हँदै जान्छन् । यही सम्झिन्छु म,हुन पनि यही नै त हो सत्य । प्रकाश विलुप भइदिएका थिए भने हामी रेइनिङ् डेज् पढ्दै हुने थिएनौँ,शायद् ।
‘वर्षादी दिनहरू’ उनको दैनन्दिक कृयाकलापहरूलाई सहज चिनाउने एउटा परिचायक किताब पनि हो । उनको नयाँ पुस्तक पढ्नुको रुची ,राम्रो पुस्तक पहिचान गर्ने सामथ्र्य र लाइब्रेरी मोहको एउटा सत्यता बोध गराउने किताब हो यो । उनी भन्छन् —कुनै नयाँ किताब पढेर सिरानीमा राख्न पाएको दिन उनलाई राम्रो निद्रा पर्छ ,यदी उनी कहीँ भेटिएनन् भने लाइब्रेरीमा भेटिनेछन् ,यस्तै ।
दर्शनको विपुलता ,अध्ययनप्रभाव,जीवनप्रतिको अस्तित्वबोध,सामयिकता,कलात्मकता,बिम्ब र प्रतीकको उचित संयोजन ,यो यस पुस्तकका मोहक पक्षहरू हुन् ।
झरना गाउँछ,बादल उठ्छ
स्पष्ट नीलोमा सेतो र क्लिष्ट
मौन मान्छे विचार्दै हिँड्छन्
सन्ध्याकालमा पुरानो बगैँचाको बाटो भएर
पुर्खाका चिहानको चिप्टो खैरोमा परिणत हुन्छ
परेवाका लहरहरू दूरीमा फरक देखिन्छन्
एउटा टँुडाल मृत आँखाहरूले हेर्छ
प््रााचीन रुखबाट पातहरू रातै झर्छन्
र ती खुल्ला झ्यालभित्र फन्फन्ति घुम्छन्
अग्निज्वाला कोठेरीभित्र बल्छ
अनि रङ्ग कठ्याङ्ग्रिएर धमिलो देखिन्छ
एउटा श्वेत अजनवी घरभित्र पस्छ
एउटा कुकुर खिइएको गल्लीमा चाट्छ
नोकर्नी बत्ती देखिने गरी बाल्छिन्
मध्यराततिर कानहरू एकालापका ध्वनीहरू सुन्छन्
यही एकालापहरू सँग निद्र्वन्द रम्ने यिनी सांसारिक पुरस्कारहरू लिन चाहँदैननन् ,शायद् जीवनलाई पहिलो र अन्तिम पुरस्कार सम्झेका छन् ,शायद् सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार यो जिन्दगीको अर्थ घटाउन चाहँदैनन्,अर्को पुरस्कार थापेर,तर मलाई थाहा छैन यसबारे ।
यिनको अर्काे महत्वपूर्ण काम भनेको लेखनमा केही नयाँ शव्दहरूको बुनोट आफ्नै ढङ्गले निर्माण गर्नु हो । केही निश्चित शव्दहरूको सम्मिलन लेखमा आयो भने त्यसले प्रकाश सायमी सम्झाउँछ । ‘भावक’, यो शव्दले प्रकाश सायमीको उपस्थिति बोध गराउँछ ,लेखनीमा किनकी यो शव्द अत्यधिक प्रयोग गर्नेमा यिनी पर्दछन् । सायमी धेरै विधाहरूमा सम्मिलित रहेपनि सबैमा उत्तिकै सशक्तता रहनु जादुमयी लाग्छ । यो जो कोही सामान्य मानिसमा असम्भवप्राय ः कुरा हो ।
सायमीको कलमले सदैव उत्खनन् गरिरहोस् –जीवनका हर पत्रपत्रको । शुभकामना । अस्तु ।
Posted by subas at 11:01 PM2comments: Links to this post
उर्गेनको घोडा,एउटा विषम समयको अनुवाद
सेतासेता घोडाहरूका हजारौँ आकृतिहरू हिउँ फुस्फुसाएझैँ कोठाभरि रङमङिएका थिए ,सम्पूर्ण कोठा त्रिआयामिक क्यान्भासझैँ लाग्थ्यो , र यो घोडा हो उर्गेनको घोडा । एउटा अमुर्त पोटे«टजस्तो घोडाको बयान छ यहाँ ,कथाको शुरुवाततिर ।
यो कथा होइन वास्तविकता हो । तपाईँ ,म वा जो कोही थोरै वा धेरै यहाँ अभिव्यक्त पीडाहरू भोग्नेमा पर्छौँ नै । मात्र यत्ति हो कसैले एकथरीबाट पीडा पाए होलान् कसैले अर्काथरीबाट । यो नेपालको एउटा समयको आशिंक झझल्कोजस्तो पनि हो । किताबहरू सँग डराउनुको पीडा । आफ्नै घरका कोठाहरू ,खेत र खलियानहरू सँग डराउनुको पीडा । आफ्नै घरगाउँलेहरू र छिमेकीहरूसँग आशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था ,यो जत्तिको विषमताहरू अझै पनि सम्झनामा कुनै डरलाग्दो भूतको कथाजस्तो भई दिमागहरूमा घुमिरहन्छन् । समयले हिर्काएको एउटा दरिलो झापड आजसम्म उत्तिकै दुखिरहन्छ । कथाहरू छन् ,सहज÷असहज ,सामान्य÷जर्जर,राम्रा÷नराम्रा तर प्रत्येक कथाहरू सत्य हुन् ।
म्हेन्दो , पल्लवी ,दिग्विजय,विद्रोह आदि उपन्यासमा प्रमुख पात्रहरू जस्तो देखा पर्दछन् । तर उपन्यासकारको मुख्य चलाखी यहीँ छ ,हामी म्हेन्दो र पल्लवीका कथाहरू पढ्न खोजिरहेका हुन्छौँ तर उनीहरूको माध्यमबाट हामी पढिरहेका हुन्छौँ, नेपालको बाह्र वर्षे द्वन्द ,थाहा अभियानका प्रणेता÷अभियन्ता रुपचन्द विष्ट ,द्वन्दको समयमा रहेको प्रहरी र छापामारहरूको मानसिकता आदिआदि । यो उपन्यास कथाहरूको एउटा शृङ्खला बोकेर आउँछ । फेरि त्यो त्यहीँ रोकिन्छ र अर्को क्रम भर्न थाल्छ,गाग्रोमा पानी भरेजस्तै । बटुकोले वा सानो मगले वा सानो अम्खोराले गाग्रोमा पानी खन्याउनु ,खन्याउनु र फेरी खन्याउनजस्तै । तृप्तताकोृ एउटा सग्लो अनुभूति हुन्छ, उपन्यास सकिएपछि । कथा बुनाई कलात्मक छ – कुनै रुमालमा भरिएको प्रकृतिको एउटा सर्वोत्कृष्ट कोल्याजजस्तो ।
उर्गेनको घोडाको लगाम बहुत राम्रोसँग समात्न सफल छन् –युग पाठक । यसमा ‘उर्गेनको घोडा’ नामक एउटा उपन्यास शृङ्खला ‘लाल पाइलो’ पत्रिकामा विभिन्न व्यक्तिहरूले पढिरहेको कथनात्मक अभिव्यक्ति दिँदादिँदै यसको सम्पूर्णत ः कथा बताइसक्छन् उनी । कहिले ‘उर्गेनको घोडा’ सुमेरु सहरको एउटा व्यक्ती मौसम र उसकी पत्नी (सचेतजस्तो,मानौँ) पढ्छन् त कहिले प्रहरी जवान दलसिङ तामाङ र उसकी श्रीमती म्हेन्दो त कहिले जेलभित्रकी महिला छापामार राधिका ,फूलमाया त्यस्तै सेनाका कर्नेल र जर्नेलहरू ,अनि पढ्न बजारमा बसेको सुबोध आदिआदि । सहरमा यो पत्रिका वर्जित गरिएको हुन्छ र यही पढ्नुको कौतुहलता सबैसँग व्याप्त हुन्छ । मौसमले घरमा पुलिस आएको शङ्कामा ‘लाल पाइलो’ पत्रिकाको खोल च्यातेर फ्याँक्दाको हताश अवस्था भोग्नुको पर्याय हामीहरू पनि बाँचिरहेका छौँ र थियौँ,शायद् विविध अर्थमा । यो उपन्यास विशृङ्खलित शृङ्खलाहरूको एउटा परिपूरक सिङ्गो कथा पनि हो । यसमा सवाल्टर्नीय यथार्थता पाइन्छ । एउटा गर्भिणी छापामारको युद्धप्रतिको मोह र उनको शारीरिक अशक्तताले युद्ध छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई निकै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गबाट बयान तथा विश्लेषण गरिएको छ –उपन्यासमा । समयको चक्काहरूले पेल्दै र थिच्दै लगेको मान्छेहरूको सजीव कथा जसरी उठेको छ ,त्यो मोहकजस्तो र प्रिय छ ।
विशेषत ः तामाङ् जातिको इतिहासको उत्खनन् गर्न खोजेर यिनले अन्य जातजाति र समुदाय सबैसँग उस्तै कथा र व्यथाहरू लुकेकोप्रति औँल्याएका छन् ।
उर्गेन राजाको नजिकको मान्छे हो । ऊ घोडचढी र शैन्य विधामा पारङ्गत र निकै कुशल छ । युद्धमा राजाको हत्या भइसकेपछि पनि ऊ जीवित रहेर उसले पुनः आफ्नो शैन्यबल शुदृढ गरेर खस शेनामाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गर्दछ । अनि आफ्ना साथी र सम्प्रदायको सुरक्षामा तल्लिन रहन्छ तर एकदिन उर्गेन र उसका राजाहरू लाई खस सेनाले कुनै विषयमा विशेष छलफलका निम्ति बोलाउँछन् र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले उनीहरूको हत्या हुन्छ । उर्गेनको र उसको सेतो घोडाको टाउको काटिन्छ ।उनीहरूको शरीरको टाउको र गिँडलाई याबेङ् खोलामा बगाइन्छ । एउटा पाशविक र नृशंश हत्या गरिन्छ उर्गेन र उसको घोडाको ।
‘याबेङ खोला’ यो एउटा इतिहासको डरलाग्दो सत्यता बोक्ने खोला हो । तामाङहरूमा यो खोला काटेर जानुहुँदैन र यदी यो खोला काटेर कुनै तामाङहरू गएभने उनीहरू फर्कदैनन् (मर्छन् या मारिन्छन् ) भन्ने विश्वास अद्यापी जिउँदै छ । यही याबेङ खोलाको किनारमा तामाङ्गी राजा र उनका मान्छेहरूलाई वार्ताको लागि बोलाएर षडयन्त्रमूलक र बद्नियतपूर्ण ढङ्गबाट मारिएको कथा उल्लेख गरिएको यस उपन्यासमा उपन्यासकारले त्यसबेलादेखि नै तामाङ्हरू हार्ने वर्गमा परेकाले यिनीहरू माथि दमन र शोषण रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । तामाङहरूलाई हेपेर ‘भोटे’ र ‘छोटो बुद्धी भएको’ भनी भन्न थालिएको कुराको पनि जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै ‘भोटेको बुद्धी पछि आउँछ’ ,‘यिनीहरू हारेर भागेर पहाडका टुप्पाहरूमा बस्न पुगेका हुन्’,‘यिनीहरू जाँड र रक्सीका पोकाहरू हुन्’ ,‘यिनीहरू ढोके,हुक्के,छाते,रिक्साचालक आदिभन्दा माथिका हैसियतका होइनन् ’ भन्नेजस्ता कथनहरू समाजमा पर्याप्त सुनिने विषयप्रसङ्गहरू पनि उनले उठान गरेका छन् ।
यिनको सर्वोच्च सशक्तता भनेको उपन्यासमा राजनीतिक विषयवस्तुको उठान भएता पनि त्यसमा कटुता ,आक्रोश,द्वेश,क्लेश,रुष्टताको अभिव्यक्ती छैन । सौन्दर्यपूर्ण ढङ्गबाट क्रन्तिचेतनाको उजागर गर्न सक्नु उनको ठुलो खुबी मान्नुपर्छ । उपन्यास पढ्नमा कठिन छैन ,बिम्ब र प्रतीकहरूको अत्यधिक प्रयोग हुनुले उपन्यासको सुन्दरता वृद्धि भएको छ ।
यिनले जुन जीवनको पारडक्सेस र कन्ट्राडिक्सनहरू छन् तिनीहरूको गतिलो फ्युजन गर्न खोजेका छन् र सफल छन् । एउटा गर्भिणी आइमाईमान्छे (म्हेन्दो) युद्धमा हिँड्छे वा हिँड्न चाहन्छे भने त्यहाँ विध्वशं र सिर्जना सँगसँगै उपस्थित गराउन खोजेका छन् । हुनसक्छ वास्तविकतामा यो कति सहज छ , आआफ्नो विश्लेषण र अनुभवहरू सँगको तादात्म्यता खोज्नु ठीक हुन्छ । तर सहज, असहज जेभएपनि युद्धको वास्तविकता भने यही हो । अर्को एउटा अद्भूत् कुरा के भइदिन्छ भने म्हेन्दोको जीवनसाथी जो हो (विद्रोह), ऊ पूर्व सरकारी सेना हो र यिनीहरूको सम्मिलन पनि अनौठो सिद्ध छ । यहाँ पनि एउटा पाराडक्स नै छ ,मानौँ ।
म्हेन्दो कुनै एउटा सैनिक ब्यारेक आक्रमणमा सरिक रहेकी हुन्छे ,त्यहाँ सरकारी सेनाले हार्ने परिस्थिति बन्छ । त्यहाँ खटिएको एउटा लप्टन हुन्छ धर्मवीर क्षेत्री । लगभग धर्मवीर र अन्य एकाध सेनामात्र बाँकी रहेको स्थिति बन्छ शैन्य टुकडी । उनीहरू एउटा ट्रेन्चमा हुन्छन् र त्यहाँबाट निकालेर आफ्नो कब्जामा लिने काम म्हेन्दोको रहेको हुन्छ । यही बीचमा म्हेन्दोको आकर्षणमा सम्मोहित हुन पुग्छ धर्मवीर । म्हेन्दोको हातमा बन्दुक हुन्छ । उनीहरू म्हेन्दो र उसका साथीहरूको कब्जामा पर्छन् । यस्तो क्रिटिकल सिचुयसनमा समेत धर्मवीर म्हेन्दोको लामो कपाल, उसका बन्दुक बोकेका सुहाएका हातपाखुराहरू , सँगैको आत्मीय हिँडाइ आदिले गाँजिन पुग्छ म्हेन्दोको आकर्षणमा । पछि यही पात्र धर्मवीर थापा सेनाबाट विद्रोह गरेर आई जनसेना ‘विद्रोह’ बन्छ यानेकी म्हेन्दो र ऊ पे्रमीप्रेमिका हुँदै श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्धमा गाँसिन पुग्छन् । यसरी प्रेमलाई युद्धसँग फ्युजन गर्न सक्नु यिनको निकै ठुलो खुृबी बनेको छ यस उपन्यासमा ।
मृत्यु,मृत्यु अनि मृत्यु ।
यो जनयुद्ध हो कि मृत्युउत्सव ?
मोर्चामा मर्नु छँदै छ ,दुर्घटना उत्तिकै छन् ।कोही साथीहरू बम बनाउँदा बनाउँदै पड्केर मरेका छन्,कोही हिउँले पुरिएर मरेका छन् ,गाउँघर ,सहरबजार अब त मृत्युको खबर भन्दा केही छैन । संवेदना भन्ने चीज नै अब बाँकी रहेन ,मृत्युको खबर पनि अब सामान्य भैसक्यो कसैलाई घोच्नै छोडिसक्यो ।
आफू अघिल्तिरको संसारै कालो रङले पोतिएको क्यान्भासजस्तो लाग्न थाल्यो ,रगतको छिर्का यत्रतत्र रगतको फूल भएर फुलिरहेझैँ ,रगतको शीत भएर टप्किएझैँ ,रगतको पालुवा भएर पलाएझैँ ,रगतको धरहरा भएर उभिएझैँ प्रतीत भयो ।
जनता खचाखच चढेको बसलाई एम्बुसमा पार्नु ? कस्तो उदेकलाग्दो कुरा ।
म अपराधको जिम्मा लिन्न ! म मृत्युउत्सवको जिम्मा लिन सक्दिन ।
देशभर अनेक भिडन्तहरू भैरहेका छन् । ठुल्ठुला लडाइँ, सहरहरू ध्वस्त भएको ,लासहरू यत्रतत्र छरिएका ,ब्यारेकको छेउछाउमा सामूहिक हत्या गरिएको इत्यादीइत्यादी । हिंस्रक बनेका थिए रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू पनि ।
संवेदनहीनताको कत्रो जुलुुस ! यो भयावह इतिहासको च्याप्टरबाटै भाग्छु ।
–एउटा छापामारमा पलाएको एउटा सफेद सोच हो यो ।
साँच्चिकै कुनै समयले हिर्काएको चोट सहँदासहँदै अति विचलित भएपछि मान्छेलाई सबै कुराहरू अप्रिय लाग्न थाल्छ । एउटा घटनाक्रमले बिथोलिएर छापामार बनेको व्यक्तिलाई त्यहाँ अर्को घटनाक्रमहरूले हिर्काउन थालेपछि ऊ पलायनको ठुलो भड्खारोतिर जाँदोरहेछ । त्यही खालको अवस्थाचित्रण पनि उनले यस उपन्यासमा गरेका छन् । युग पाठकको उपन्यास उर्गेनको घोडा एउटा विषम समयको जटिल अनुवाद हो । उनले यसमा एक तरिकाले इतिहाँसको एउटा पाटोलाई गम्भिर विश्लेषण तथा उत्खनन् गरेका छन् । जुन सह्रानीय सिद्ध छ ।
उर्गेन र उसको घोडाको पुनरागमनको प्रतीक्षा यो समयले गरिरहेको छ – उनले यस्तै बुझेका छन् । हरेक क्षण र पात्रहरू उर्गेनको घोडाको नमीठो आकारले पिरोलिइरहेका छन् । याबेङ खोलाहरू अझैपनि उर्गेन र उर्गेनका टाउकाहरू बोकेर बगिरहेको छ । उसको घोडा र घोडाका टाउकाहरू लिएर बगिरहेको छ र उसकै रगतको छालहरू उठिरहेका छन् –याबेङ् खोलाहरूमा । उर्गेनहरू इतिहासमा विजयको अन्तिम सङ्घार टेक्नुअघि काटिने टाउकाहरू हुन् । युग पाठक यस्तै बताउँछन् ,शायद् ।
हरेक अपरिचितजस्ता ,हेपिएका ,थिचोमिचोेमा परेका ,दबाइएका ,सामान्यतया ः माथि उठ्न नसकेकाहरू लाई सम्बोधन गरेर लेख्नु उनको सह्रानीय र प्रशंशायोग्य पक्ष हो तर यिनको लेखक वन डाइमेन्सनालिटीबाट भने बच्न सकेको छैन । जबसम्म समाजको चित्रण थ्री डायमेन्सनल फिगरबाट हुँदैन तबसम्म त्यो कम्प्लिट भने हुँदैन । पूर्णताको फिगरहरूको स्केच यिनीबाट पछिल्ला दिनहरूमा हुनेछ ,यही कामना गरौँ । उनको लेखनीको दमभने यथावत कायम भइरहोस् ।
युग पाठकको निरन्तर सुदृढ लेखनीको कामना । अस्तु ।
Posted by subas at 4:32 AM2comments: Links to this post
Posted by subas at 4:32 AM No comments: Links to this post
Posted by subas at 4:32 AM3comments: Links to this post